Karaman'ny mpiasam-panjakana: Maninona tsy atao virement bancaire, na Mvola na orange money avokoa
lundi, 06 janvier 2020 21:45
Tena tsy azoko ny fitantanam-bolam-panjakana eto amintsika, ny karaman'ny mpiasa, eny hatramin'ny andrimpanjakana ambony toy ny Solom-bavambahoaka dia mbola atao espèce, alaina amin'ny gony eny amin'ny trésor ny karama isam-bolana.
Mitaraina amin'izay isika hoe ampiasain'ny questeur aloha ny vola vao zarainy ny karama, ny solo-penakoho ho an'ny mpiasam-panjakana misy manodikodina, ao no milaza fa nisy namaky ny trano dia very, sy zao tantara angano rehetra asaina manao sonia taratasy fotsy zao ihany koa.
Nahoana no tsy terena anokatra kaonty any amin'ny banky, na microcred, na Mvola na orange money na Airtel money, na Paositra money. Ataoko fa 90% n'ny mpiasam-panjakana dia manana an'ireny akaiky azy.
Sady ahitana ny fonctionnaire fantôme ireny, no vola tsy misy very ary mora arahina maso.
Betsaka ny ahita fialana etsy sy eroa, fa rehefa apetraka izay lamina izay, tsy maintsy mahita vaha olana izay olona manana olana manokana.
Aoka atao toy izany koa ireo be antitra, fa dia mijaly mahita azy ireo milahatra vao maraina mandeha alavitra haka ny pension.
Raha te hiroso amin'ny ady amin'ny kolikoly sy te hanana fitantanana madio isika, dia tsy maintsy miditra mampiasa ny teknolojia, ny numérique.
Amiko manokana moa efa nambarako hatrany, fa esory any io vola taratasy io, fa soloy carte électronique, dia hiditra avy hatrany ny hetra rehetra, ny hetra izay hany miditra 15% ankehitriny ho lasa 75%, ny tetibola 5000 miliara ariary, ho lasa 25 000 miliara ariary, ho tratra ireo mpanao kolikoly, hiena ny tsy fahandriam-pahalemana satria tsy misy hitondra lelavola, ny mpivarotra rehetra hiditra amin'ny ara-dalàna avokoa, tapitra hatreo ny mpivarotra amoron-dalana, satria izay tsy manana toeram-pivarotana tsy omena lecteur de carte. Ho voafehy ny halatr'omby satria tsy maintsy hita iza no nividy ny ombin'iza tamin'ny carte an'iza?
Ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra, afaka mampiasa carte ihany koa satria misy carte tsy mila code fa akasoka fotsiny, sady hiandry tsy nandeha nianatra kosa ve ny fampandrosoana, nefa ny mpitondra nifandimby niezaka nanao sekoly, nefa ny zanany nalefany niandry omby.
Ireo tsy nianatra asiana rattrapage mandeha mianatra fa fanetry ben'ny firenena ihany koa izy ireny. Tsy misy fiangaviana eo, fa tsy maintsy, ny Lalampanorenana Malagasy mihitsy no manery ny zaza rehetra mandeha mianatra. Angalao mpitandro filaminana, gadrao ireo ray aman-dreny tsy mandefa zaza mianatra.
Ataovy mamaim-poana kosa ny fianarana ambaratonga voalohany, izay ny Lalampanorenana ihany koa no milaza an'izay, tsy misy sarany na ariary aza, fandikana Lalampanorenana izany ireny fakana vola Fram sy frais d'inscription ireny. Omeo cantine scolaire sy transport scolaire avokoa ny zaza malagasy rehetra.
Tsy ekena ny hoe lasa concours voafetra no mahazo miditra 6e sy classe de seconde. Ny zaza efa tsy ampy fivelomana indray no tsy tafiditra eny amin'ny CEG na Lycée satria hoe tsy nahazo note ambony.
Manam-bola 77 millions de dollar madiodio fanjakana anaovana stade de foot, ka tsy hanam-bola ampianarana ankizy ve ? (77 millions de dollar = 270 miliara ariary, mahavita sekoly 200)